ဘင်္ဂလီလူဦးရေကြောက်မခန်းလိလိလူဦးရေပေါက်ဖွားနှုန်းမြင့်မားလာနေ | ngalone
← ဘူးသီးတောင် နှင့်မောင်တောမြို့နယ်များရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် ဘင်္ဂါလီကျူးကျော်အိမ်များ ရွာများ မြို့နယ်အဝှမ်း တိုးပွားလာနေ →
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောခရိုင်ရှိမြို့နယ်နှစ်ခုဖြစ်သည့် ဘူးသီးတောင်နှင့်
အဆိုပါမြို့နယ်များတွင် လက်ရှိဘင်္ဂါလီလူဦးရေမှာ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၌ ၉၃%
နှင့် မောင်တောမြို့နယ်၌ ၉၇% ရှိနေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်လူဦးရေ၏ ၄၈.၇%
သည်အဆိုပါမြို့နယ်နှစ်ခုရှိ ဘင်္ဂါလီလူဦးရေ ဖြစ်နေကြောင်းသိရသည်။
ရဲကင်းများလုံလုံလောက် ချထားမှုမရှိသည်များကြောင့် ၎င်းရွာများတွင်
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့နေသလိုဖြစ်နေပြီး ထင်သလိုတရားမဝင်
အလွန်အမင်း တိုးပွားလာနေကြောင်းသိရသည်။ ၎င်းတို့ကို အချိန်မီထိထိရောက်ရောက်
ဒေသတည်ငြိမ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ ၎င်းအပြင်
အဆိုပါဒေသများရှိ တရားမဝင်သင်ကြားနေသည် အာရေဗီစာသင်ကျောင်းနှင့်
အာရေဗီတက္ကသိုလ်များသည် ဘာသာရေးအစွမ်းရောက်များကို ဆက်လက်တိုးပွား
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← ဘူးသီးတောင် နှင့်မောင်တောမြို့နယ်များရှိ
"လွတ်လပ် သော ရခိုင်နိုင်ငံတော် ကြီးဆီသို့" Createafree website or blog at WordPress.com.